फिदिम नगरपालिकाको बजेट रु. ६२ करोड – Hotpati Media
फिदिम नगरपालिकाको बजेट रु. ६२ करोड
९ असार २०७६, सोमबार २०:०८ मा प्रकाशित (1 वर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट
पाँचथर-आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि फिदिम नगरपालिकाले रु. ६२ करोड ८ लाख ६६ हजार बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।
सोमवारबाट सुरु भएको फिदिम नगरपालिकाको ५ औं नगर सभामा नगरपालिकाकी उपप्रमुख उर्मिला प्रधान (श्रेष्ठ)ले उक्त बजेट प्रस्ताव गरेकी हुन् ।
उपप्रमुख प्रधानले संघीय सरकारबाट रु. १५ करोड ४६ लाख तथा प्रदेश सरकारबाट रु. ७६ लाख २३ हजार वित्तीय समानिकरण अनुदानको सीमा प्राप्त भएको जानकारी दिइन् ।
यस्तै राजश्व बाँडफाँट तर्फ संघीय सरकारले रु. ११ करोड ७२ लाख र प्रदेश सरकारले १ करोड ४४ लाख प्राप्त हुने सीमा निर्धारण भएको छ । फिदिम नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोतबाट रु. ३ करोड ३० लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै संघीय सरकारले सशर्त अनुदान तर्फ रु. २९ करोड ४० लाख बजेट प्रदान गर्ने बजेट सीमा नगरपालिकालाई पठाएअनुसार उक्त कुल बजेट प्रस्ताव गरिएको नगर उपप्रमुख प्रधानले जानकारी दिईन् ।
उपप्रमुख प्रधानले वडाका विकास योजनाहरु सञ्चालनका लागि १४ वटा वडामा ५० लाखको दरले बजेट ब्यवस्था गरिएको साथै फिदिम नगरपालिकाले लागत साझेदारीमा ठूला विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने उदेश्य अनुरुप ५ करोडको समपुरक कोष निर्माण गरीएको समेत जानकारी दिईन् । जस्ले साना र मद्यौला योजना भन्दा उल्लेख्य प्रगति हुने समेत अपेक्षा गरीएको छ ।
फिदिम नगरपालिकाले पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नतिमा विशेष ध्यान दिने नीति नगर सभामा पेश गरेको छ । पूर्वाधारका अतिरिक्त कृषि, पशु सेवा, शिक्षा, प्रकोप ब्यवस्थापन, लैङ्गिक समस्या समाधानमा जोड दिई नगर सभामा नीति प्रस्ताव गरिएको छ । नगरपालिकाले आवधिक योजना तयार पार्ने, पर्यटन योजना बनाउने, ब्यवस्थित अनलाइन तथ्याङ्क प्रणाली निर्माण गर्ने जस्ता योजना अघि सारेको छ ।
नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रधानका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हासम्म चालु खर्च तर्फ ७९.४८ प्रतिशत प्रगति भएको छ भने पुँजीगत खर्च तर्फ ७१.८६ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यस्तै सशर्त अनुदानतर्फ ७०.९३ प्रतिशत प्रगति भएको छ । विकास आयोजनाहरु सञ्चालनमा रहेका भौतिक र आर्थिक प्रगतिको प्रतिशत अझ बढ्ने नगर उपप्रमुख प्रधानको अनुमान छ ।
नगरसभामा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले गएको आर्थिक बर्षमा नगरपालिकाले अपेक्षित काम, कारबाही गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले नगर क्षेत्रका धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक स्थलको प्रबद्र्धन, भाषा, संस्कृतिको बिकास र पर्यटन प्रबद्र्धन साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद जस्ता क्षेत्रलाई पनि न्यायोचित रुपले सम्बोधन गर्न नगरपालिकालाई सुझाब दिएका थिए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पाँचथरबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बसन्तकुमार नेम्बाङले पाँचथरको बिकासमा आफू लागिपरेको बताउदै नगरपालिकाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन दल र नगरबासी सबैले रचनात्मक भूमिका निर्बाह गर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रमका बिशेष अतिथि प्रदेशसभा सदस्य सीता थेबेले जिल्लाको समृद्धिका लागि प्रदेश सरकार मार्फत पहल गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरीन् । पाँचौं नगरसभाको उद्घाटन शत्र फिदिम नगरपालिकाका मेयर ओनाहाङ नेम्बाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।